IiNdawo zaseMbindini zaseShimla- Airbnb Ezikhethekileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSaurav
Ibekwe kwindawo esembindini, eli gumbi licocekile licocekile, lisanda kulungiswa liziikhilomitha ezi-1 okanye ngaphantsi ukusuka kwindlela yeMall, iCawe kaKrestu kunye neRidge. Zonke ezinye iindawo zabakhenkethi zifikeleleka ngokulula ngendlela. Indlela yeSetyhula ibonakala ukusuka kwindlu kwaye inokufikelela kwibhasi okanye ukukhwela i-cab.
Eli khaya lifanelekile kwabo bahamba nosapho, izihlobo, abahambi beshishini abafuna indawo eyongezelelekileyo, abapakishi bempahla, abafundi abafunda umsebenzi abafuna izindlu zexesha elifutshane, njl.
Le ndlu ikumgangatho omnye ingena enamagumbi okulala amabini acocekileyo amakhulu aneebhedi ezimbini ezabelana ngegumbi lokuhlambela eliqhelekileyo. Kukho igumbi lokudweba eliza ne-smart TV kunye neseti yesofa ukuhlalisa abantu abayi-6. Kukwakho nendawo yokutyela kunye ne-balcony.
Ekhitshini kukho isitovu se-Induction, i-microwave, iketile yombane, izinto zokupheka, isikhenkcezisi esipheleleyo, amanzi aneminerali, ubisi, ibreakfast cereals, izinongo, i-oyile yokupheka, iti, iti eluhlaza & umgubo wekofu nezinye ezongezelelweyo. Igumbi lokuhlambela linesihlalo sasentshona kunye neshawari. Sikwanayo negiza eshushu eyi 25litres ukukunika amanzi ashushu 24*7. I-Premium Shampoo, i-Bodywash, iilinen kunye neetawuli zeendwendwe zinikezelwa. I-Wi-Fi nayo ibandakanyiwe. Iyunithi ine-oyile yokufudumeza i-oyile, ingxowa yamanzi ashushu, isifudumezi esivuthelayo ukugcina igumbi lishushu ngexesha lasebusika. Oomabonakude ababini abakrelekrele bakuvumela ukuba ufikelele kwividiyo eyiNkulumbuso, iHotstar kunye neNETFLIX simahla. Kukho umatshini wokuhlamba ozenzekelayo kunye nentsimbi ukuze iindwendwe zethu zisebenzise.
Indawo yokupaka ezitalatweni iyafumaneka simahla.
Enye yeendawo ezimbalwa eShimla apho i-OLA cabs & Swiggy ibonelela ngeenkonzo zayo.
Ukuba umtsha ku-Airbnb, ukuze wamkele ubhukisho lwakho, sicela ukuba iprofayile yakho iqinisekiswe ngokupheleleyo. Ekufikeni kwethu ngokwemigaqo karhulumente siya kucela isazisi sikaRhulumente xerox.
Xa ucela, nceda usixelele kancinci ngawe kunye neendwendwe zakho, kunye nenjongo yotyelelo lwakho ukuze silungiselele indawo ngcono.
Umbuki zindwendwe ngu- Saurav
Sifumaneka ngefowuni, kwaye sifumaneka ngokobuqu xa sifuneka.